Momba anay - Dongguan Hobrin Badge And Gift Co., Ltd.
Dongguan Hobrin Badge and Gift Co., Ltd. dia mpamatsy traikefa amin'ny asa-tanana namboarina, izay naorina tamin'ny 2012. Ny faritry ny orinasa misy anay dia 2000 metatra toradroa sy mpiasa 100. Manolo-tena izahay hanome medaly, lapels, pushpins, badge, Keyrings, labels pet, sns ho an'ny mpanjifa na mpikarakara. Ny vokatray rehetra dia amboarina ao amin'ny ozininay miaraka amin'ny fitaovana mandroso, ny haitao matotra ary ny fomba fanao fanaraha-maso henjana QC. Kalitao tsara, vidin'ny fifaninanana, teknolojia kilasy voalohany, fonosana azo antoka ary fanaterana ara-potoana no fampanantenanay.
Tamin'ny andro voalohan'ny Dongguan Hobrin Badge sy Gift Co., Ltd. Raha jerena ny lazany sy ny fanekena ny hazakazaka marathon an'izao tontolo izao dia nahazo aingam-panahy izahay hanangana orinasa hanome vokatra ho an'ny indostria. Noho izany, mifantoka amin'ny fanomezana medaly sy entana mifandraika amin'izany izahay. Manampahaizana manokana amin'ny fanaingoana medaly izahay. Manomboka amin'ny fanolorana ny teny nindramina ka hatramin'ny famolavolana sy fanaterana dia manome serivisy tokana izahay. Ny fahamalinanay sy ny fahazotoantsika manome toky ny mpanjifanay. Amin'ny alàlan'ny fahombiazan'ny medaly namboarina dia nandefa farantsakely fanamby sy tsipika lapel izahay, marika momba ny biby fiompy, marika polisy, cufflinks, fantsom-bokotra, mpanokatra tavoahangy, saribakoly PVC, badge tinplate ary vokatra vokarin'ny asa tanana maro hafa.
Nandritra ny taona maro, mpamatsy sarobidy izahay. Mifantoka amin'ny antsipiriany sy ny fahalavorariana isika. Maro amin'ireo mpanjifanay no te hiara-miasa aminay satria manolotra ny vokatra sy serivisy avo lenta miaraka amin'ny vidin'ny fifaninanana izahay. Faly izahay fa mamokatra vokatra avo lenta. Manantena izahay fa ho reharehan'ny mpanjifanay ny zava-bitany ary hahazo ny vokatra ilainy. Ny ekipanay dia hanohy hiasa mafy mihoatra ny zavatra antenainao. Izahay dia mpamatsy avo lenta. Tsy afaka miandry ny hanao raharaha miaraka aminao izahay!
Fihaonana amin'ny filan'ny mpanjifa
► Afaka manaraka ireto fepetra manaraka ireto izahay
► Teny nindramina maimaimpoana
► Tsy misy vidin'ny bobongolo aorian'ny nahazoana baiko miverimberina
► Sarany ambany sarany sy fanovana tsy voafetra
► Valio avy hatrany
► Misy santionany raha ilaina
► Famolavolana sary matihanina
► Tonga soa ny baiko maika
► MOQ ambany
► Fotoana fanaterana stadard: 8-10 andro ho an'ny santionany, 18-21 andro ho an'ny famokarana betsaka
Atrikasa fanariana maty
Atrikasa fanaovana hosoka
Atrikasa famonoana maty
CMYK fanontana offset